ShwengweGames - Page 199 of 222 - News & Media
အပူပိုင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း အကြောင်း
April 28, 2020 by Shwengwe Games
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလကုန် မေလဆန်း လောက်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်စပ်နေတဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် (အက်ဒီမန်ပင်လယ်) ဘက်မှာမုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေ ရှိနေပါတယ်။ မုန်တိုင်းလို့ ဆိုလိုက်လျှင် အများအားဖြင့် ထိတ်လန့်တတ်ကြလို့ ဒီအချိန်မှာတော့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းနဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပစ်များကိုသာ ဗဟု သုတအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (မုန်တိုင်း သတင်း နဲ့ အခြေအနေ များကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ မိုးလေဝသ သတင်းဌာနများမှ သတင်းကိုသာ လက်ခံယုံကြည်သင့်ပါတယ်။)
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရဲ့ အစဟာ ပူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာ့ကြောင့်ပူရသလဲဆိုတော့.. ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းဟာ နေမကြာခဏဖြတ်သန်းတဲ့လမ်းကြောင်း (တနည်း)အီကွေတာ ရပ်ဝန်းအနီးမှာ ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်း ကြောင်းမှာရှိတဲ့ ဒေသတွေကို အပူပိုင်းဒေသလို့သတ်မှတ်ပြီးနှစ်စဉ် ဧပြီ၊ မေ လ များဟာ အပူဆုံးလတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ့အချိန် အဲ့ဒီ့ကာလမှာ (မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေသော) နေက ဒီဒေသအပေါ်ကို တည့်တည့်ကြီးကျနေလို့ပါပဲ။
ပူခြင်းဟာရေနဲ့လေကိုပွစေတဲ့အကြောင်း စတုထ္ထတန်းသိပ္ပံဘာသာမှာကျနော်တို့သင်ခဲ့ရပါတယ်။ပွတဲ့လေဟာအထက်သို့ဆန်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ့လိုတက်သွားတဲ့အတွက်သူဖိထားတဲ့နေရာကဖိအားတွေလျော့ပါးသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နေရာကိုဖိအားများတဲ့ဘက်ကလေတွေ တိုက်ခတ်ပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာ လေတိုက်ခြင်းစဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဟာ အနောက်မှအရှေ့သို့ လည်နေတဲ့အ တွက် လေနဲ့ ရေတို့ဟာလည်းသိသိသာသာရွေ့လျားတတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာအပူချိန်ကျရောက်မှု မတူညီတဲ့အတွက်လေတိုက်ခတ်ပုံ (လေစီး ကြောင်း)ဟာလည်းကွာခြားတတ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့လေစီးကြောင်းနှစ်ခု ဆုံတဲ့အခါမှာတော့လေပွေ မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်လေပွေမုန်တိုင်းများဟာကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းမှာနာရီလက်တံပြောင်းပြန်လည်သလိုတိုက်ခတ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ဘက်မှတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လေနဲ့အတူ ရေငွေ့များစွာလည်းပါဝင်ပြီးမိုးရွာသွန်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်ဆက်စပ်သောဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်နဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်(အက်ဒီမန်ပင်လယ်) ဘက်ကမုန်တိုင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာသွန်းခြင်းကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့မုန်တိုင်းများဟာ ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးမှအားပျော့ပျက်ပြယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ မုန် တိုင်းရဲ့ပြင်းအားပေါ် မူတည်ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ရာ လမ်းကြောင်းမှာ အပျက်အဆီး ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှု၊ မဖြစ်ပေါ်မှု နဲ့ မုန်တိုင်းသွားရာလမ်းကြောင်းဟာ မတည်ငြိမ်တဲ့ “လေ” ရဲ့ ရွေ့လျားကြောင်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်တဲ့အတွက်ကြိုတင်မှန်းဆတွက်ချက်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းပညာအကူအညီများနဲ့ မုန်တိုင်းလမ်း ကြောင်းကို ရက်အနည်းငယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းလာနိုင်ကြပါပြီ။
လက်ရှိအချိန်ဟာ COVID19 ကြောင့် လူမှု စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေရပြီး စိတ်ပျက်အားငယ်နေရချိန်ဖြစ်လို့ မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားတွေ၊ထိတ်လန့်စရာတွေမဆိုကြဖို့နဲ့၊ လေ တိုက်ပြီး မိုးရွာတိုင်းလည်း မကြောက်ကြဖို့ ကြိုတင်အသိပေးချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာသင်နေထိုင်သရွေ့ တွေ့ ကြုံနေရမယ့်သဘာဝတရားဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အသိ၊ သတိ တို့နဲ့ ကာကွယ်နိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်..။
အပူပိုင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္း
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္း ေလာက္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ (အက္ဒီမန္ပင္လယ္) ဘက္မွာမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေခ် ရွိေနပါတယ္။ မုန္တိုင္းလို႔ ဆိုလိုက္လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိတ္လန႔္တတ္ၾကလို႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚရျခင္း အေၾကာင္းနဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးပစ္မ်ားကိုသာ ဗဟု သုတအျဖစ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (မုန္တိုင္း သတင္း နဲ႕ အေျခအေန မ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မိုးေလဝသ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းကိုသာ လက္ခံယုံၾကည္သင့္ပါတယ္။)
အပူပိုင္းမုန္တိုင္းရဲ႕ အစဟာ ပူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဘာ့ေၾကာင့္ပူရသလဲဆိုေတာ့.. က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းဟာ ေနမၾကာခဏျဖတ္သန္းတဲ့လမ္းေၾကာင္း (တနည္း)အီေကြတာ ရပ္ဝန္းအနီးမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ထိုလမ္း ေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ ေဒသေတြကို အပူပိုင္းေဒသလို႔သတ္မွတ္ၿပီးႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ၊ ေမ လ မ်ားဟာ အပူဆုံးလေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့အဲ့ဒီ့အခ်ိန္ အဲ့ဒီ့ကာလမွာ (ေျမာက္ဘက္ကိုေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ) ေနက ဒီေဒသအေပၚကို တည့္တည့္ႀကီးက်ေနလို႔ပါပဲ။
ပူျခင္းဟာေရနဲ႕ေလကိုပြေစတဲ့အေၾကာင္း စတုထၳတန္းသိပၸံဘာသာမွာက်ေနာ္တို႔သင္ခဲ့ရပါတယ္။ပြတဲ့ေလဟာအထက္သို႔ဆန္တက္ပါတယ္။အဲ့ဒီ့လိုတက္သြားတဲ့အတြက္သူဖိထားတဲ့ေနရာကဖိအားေတြေလ်ာ့ပါးသြားပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနရာကိုဖိအားမ်ားတဲ့ဘက္ကေလေတြ တိုက္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ဒီေနရာမွာ ေလတိုက္ျခင္းစျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဟာ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ လည္ေနတဲ့အ တြက္ ေလနဲ႕ ေရတို႔ဟာလည္းသိသိသာသာေ႐ြ႕လ်ားတတ္ပါတယ္။ကမာၻ႔ေနရာေဒသအသီးသီးမွာအပူခ်ိန္က်ေရာက္မႈ မတူညီတဲ့အတြက္ေလတိုက္ခတ္ပုံ (ေလစီး ေၾကာင္း)ဟာလည္းကြာျခားတတ္ပါတယ္။
မတူညီတဲ့ေလစီးေၾကာင္းႏွစ္ခု ဆုံတဲ့အခါမွာေတာ့ေလေပြ မုန္တိုင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္ေလေပြမုန္တိုင္းမ်ားဟာကမာၻ႔ေျမာက္ျခမ္းမွာနာရီလက္တံေျပာင္းျပန္လည္သလိုတိုက္ခတ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ဘက္မွတိုက္ခတ္ျခင္းျ ဖစ္ေသာေၾကာင့္ေလနဲ႕အတူ ေရေငြ႕မ်ားစြာလည္းပါဝင္ၿပီးမိုး႐ြာသြန္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ကပၸလီပင္လယ္(အက္ဒီမန္ပင္လယ္) ဘက္ကမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာမိုး႐ြာသြန္းျခင္းကိုစတင္ျဖစ္ေပၚေစတာျဖစ္ပါတယ္။
တခါတရံမွာေတာ့မုန္တိုင္းမ်ားဟာ ကုန္းတြင္းပိုင္းကိုဝင္ေရာက္ၿပီးမွအားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ မုန္ တိုင္းရဲ႕ျပင္းအားေပၚ မူတည္ၿပီး မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွာ အပ်က္အဆီး ဆုံးရႈံးမႈေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ၊ မျဖစ္ေပၚမႈ နဲ႕ မုန္တိုင္းသြားရာလမ္းေၾကာင္းဟာ မတည္ၿငိမ္တဲ့ “ေလ” ရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္တဲ့အတြက္ႀကိဳတင္မွန္းဆတြက္ခ်က္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နည္းပညာအကူအညီမ်ားနဲ႕ မုန္တိုင္းလမ္း ေၾကာင္းကို ရက္အနည္းငယ္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းလာနိုင္ၾကပါၿပီ။
လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ COVID19 ေၾကာင့္ လူမႈ စီးပြားေရးေတြ က်ဆင္းေနရၿပီး စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္လို႔ မုန္တိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအမွားေတြ၊ထိတ္လန႔္စရာေတြမဆိုၾကဖို႔နဲ႕၊ ေလ တိုက္ၿပီး မိုး႐ြာတိုင္းလည္း မေၾကာက္ၾကဖို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမာၻႀကီးေပၚမွာသင္ေနထိုင္သေ႐ြ႕ ေတြ႕ ႀကဳံေနရမယ့္သဘာဝတရားျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အသိ၊ သတိ တို႔နဲ႕ ကာကြယ္နိုင္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါတယ္..။
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်သော နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်သင့်သော နည်းလမ်းများ
ကလေးတွေမှာနှာခေါင်းသွေးလျှံတာဟာ အဖြစ် များတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာ အန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူး။နှာခေါင်းသွေးလျှံတယ်ဆိုတာနှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းနံရံကသွေးကြောငယ်လေးများပေါက်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့နှာခေါင်းအတွင်းနံရံဟာအင်မတန်နူးညံ့ပါးလွှာပြီးတော့ သွေးကြောလေးတွေကအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အလွယ် တကူပေါက်ထွက်လွယ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်နှာခေါင်းသွေးလျှံတာဟာအလွန် ဆုံးငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာဘဲ သူ့အလိုလိုရပ်သွားတဲ့အတွက် ဆရာဝန်ဆီသွားစရာမလိုပါဘူး။မိမိအိမ်မှာပဲရှေးဦး သူနာပြုစုနည်းနဲ့ကုသပေးလို့ရပါတယ်။
နှာခေါင်းသွေးလျှံနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ –
၁၊ နှာခေါင်းခဏခဏကလော်ခြင်း၊ ၂၊ နှာခေါင်းကိုထိခိုက်မိခြင်း၊ ၃၊ ရာသီဥတုခြောက်သွေ့ပူပြင်းခြင်း၊ ၄၊ နှာခေါင်းအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ၅၊ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ၆၊ နှာခေါင်းအတွင်းပစ္စည်းတစ်ခုခုဝင်ခြင်း၊ ၇၊ ဝမ်းတအားချုပ်၍ တအားညှစ်ရခြင်း၊ ၈၊ အချို့သောဆေးဝါးများ၊၉၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေခြင်း (ဒါဟာအလွန်ရှားပါတယ်) စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းသွေးလျှံတဲ့အတွက်ကလေးမှာ နာကျင် မှုဝေဒနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သွေးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်၊သွေးထွက်နေတာသိတဲ့အတွက်ကလေးဟာအထိတ် တလန့်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကလေးကိုချော့မော့နှစ်သိမ့်ပေးပါ။ပိုငိုရင်ပိုပြီးတော့သွေးထွက်တတ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အောက်ဖော်ပြပါရှေးဦး သူနာပြုစုနည်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
၁၊ ကလေးငယ်ကို ပုံပါအတိုင်း သူ့ဖာသူဖြစ်စေ၊လူကြီးပေါင်ပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ သက်တောင့်သက်သာထိုင်ခိုင်းပြီးအရှေ့ကို အနည်း ငယ်ငိုက်ထားပေးပါ။
လှဲမနေပါစေနဲ့။ ကလေးဦးခေါင်းကိုနောက်လှန်မနေပါစေနဲ့။ နောက်လှန်နေမယ်ဆိုရင်သွေးဟာနှာခေါင်းအနောက်ဖက်ကနေလည်ချောင်းအထိပြန်ဆင်းပြီးတော့ ပြန်အန်နိုင်တယ်။အန်ရင်နှာခေါင်းသွေးထွက်တာပိုဆိုးနိုင်တယ်။အသက်ရှုတာကိုပါအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂၊ ပုံပါအတိုင်းနှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုရဲ့အထက်နား နှာတံအောက်ဖက် ပျော့နေတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ခပ်ဖွဖွဆယ်မိနစ် လောက်ဖိညှစ်ထားပေးပါ။
၃၊ ဒီလိုဖိညှစ်ထားချိန်မှာသွေးတိတ်ပြီလားဆိုတာသိချင်လို့လက်ကိုဖယ်မကြည့်ပါနဲ့။သွေးခဲဖို့အချိန်ပေးပါ။ကလေးကိုအာရုံပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ သူစိတ် ဝင်စားတာတစ်ခုခုပေးကြည့်ထားပေးပါ။
၄၊ ဆယ်မိနစ်ပြည့်ရင်လွှတ်ကြည့်ပြီးသွေးထွက်မထွက်စစ်ဆေးပါ။ တကယ် လို့သွေးဆက်ထွက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆယ်မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ဖိညှစ်ပေးပါ။
ရေခဲအဝတ်ဒါမှမဟုတ်ရေခဲအိတ် ကိုကလေး နှာတံအပေါ် (သို့) လည်ပင်းအနောက်နဲ့ ဘေးဖက်မှာ အုပ်ပေးပါ။
ပါးစပ်ထဲမှာ သွေးရှိနေရင် ထွေးထုတ်ခိုင်းပါ။ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။အေးတဲ့အရည်တစ်ခုခုတိုက်ပေးပါ။
၁၊ နာရီအနည်းငယ် ပေးနားပါ။ ၂၊ ပူတဲ့အစားအသောက်၊ ရေနွေးချိုးတာစသည်တို့ကို နောက်တစ်ရက်လောက်ရှောင် ကြဉ်ပါ။ ၃၊ ကလေးနှာခေါင်းကိုမနှိုက်ပါစေနဲ့၊မကလော်ပါစေနှင့်၊ ၄၊ ဝမ်းချုပ်မခံပါနဲ့။ အောက်ပါအခြေအနေများရှိလာမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။
၁၊ အထက်ပါ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ သွေးမတိတ်/ သွေးထွက်အရမ်းများ/ ကလေးမူးမေါ် အသက်ရှူကြပ်လျှင် ၂၊ နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်သွေးထွက်လျှင် ၃၊ နှာခေါင်းသွေးသာမက သွားဖုံးသွေးထွက်မယ် အရေပြားမှာအညို အမည်းအနီစက်ထွက်မယ်ဆိုလျှင် ၄၊ မိသားစုထဲမှာသွေးမတိတ်ရောဂါရှိလျှင်
ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေမှာနှာခေါင်းသွေးလျှံတာဟာအဖြစ်များတဲ့၊ အန္တရာယ်မရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုဟာဆေးရုံဆေးခန်းကိုသွားစရာမလိုဘဲအိမ်မှာပဲရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ကုသနိုင်ပါတယ်။
reference: The Royal Children’s Hospital Melbourne
စင်ကာပူ (DDI Lab) က တွက်ချက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြန်မာပြည် ကိုဗစ်-၁၉ အဆုံးသတ်မယ့်နေ့
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-19 ဘယ်နေ့ အဆုံး သတ်မလဲ။စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇိုင်းနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (DDI Lab) Singapore University of Technology and Design (SUTD), Data-Driven Innovation Lab. က ထုတ်ပြန် ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ အရ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၁ နိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို ခန့်မှန်း တွက်ချက်ထားရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာလာမယ့် မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့ ခန့် မှန်းတွက်ချက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
(ကိုဗစ်-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ ခန့်မှန်းရက် ဇယား)
အစိုးရရဲ့ယခုလက်ရှိပိတ်ပင်မှုတွေ ကန့် သတ်ချက်တွေကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့ထိပဲ တိုးမြှင့်ထားပြီး၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုလည်းမေလ ၁၈ ရက်နေ့ ပြန်လည်စတင် ခေါ်ယူဖို့ သတ်မှတ်ရက် ကြေညာခဲ့တာတွေ့ရတဲ့အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ယခုစင်္ကာပူနိုင်ငံဒီဇိုင်းနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် DDI Lab ရဲ့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ ဒေတာ အချက်အလက်တွေကို ယုံကြည်ကိုးကားထားလေသလား ထင်မှတ် ရပါတယ်။
ဒေတာအချက်အလက်တွေခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားရာမှာ မူရင်း အချက် အလက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေရဲ့ မှန်ကန်မှုကလဲအလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID -19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အချက်အလက်တွေဟာ ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး မှန်ကန်မှု ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇိုင်းနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် DDI Lab ရဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ ဒေတာအချက် အလက်တွေလည်းရာနှုန်းပြည့်နီးပါး မှန်ကန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ဒါမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာနလန်ထနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား။
လက်ရှိမြန်မာ့အနေအထားကကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်သေကြေပျက်စီးမှုထက်ကိုကိုဗစ်ရောဂါအလွန် စီးပွား ပျက်ကပ်ကြောင့်ငတ်သေကုန်မှာ ပိုပြီးတော့စိုးရိမ်သောကရောက်နေရတာ မဟုတ်ပါလား။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (ရောဂန္တရ) ကပ်ဘေးကြီးအမြန်ပြီးဆုံးပြီးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း(ဒု ဗ္ဘိက္ခ န္တရကပ်)ဘေးကြီးမဆိုက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
စင္ကာပူ (DDI Lab) က တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ ကိုဗစ္-၁၉ အဆုံးသတ္မယ့္ေန႕
ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုဗစ္-19 ဘယ္ေန႕ အဆုံး သတ္မလဲ။စကၤာပူနိုင္ငံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (DDI Lab) Singapore University of Technology and Design (SUTD), Data-Driven Innovation Lab. က ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အရ ကမာၻ႔ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃၁ နိုင္ငံရဲ႕ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အဆုံးသတ္နိုင္တဲ့ ရက္ေတြကို ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဟာလာမယ့္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕မွာအဆုံးသတ္သြားမယ္လို႔ ခန႔္ မွန္းတြက္ခ်က္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
(ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အဆုံးသတ္နိုင္တဲ့ ခန႔္မွန္းရက္ ဇယား)
အစိုးရရဲ႕ယခုလက္ရွိပိတ္ပင္မႈေတြ ကန႔္ သတ္ခ်က္ေတြကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕ထိပဲ တိုးျမႇင့္ထားၿပီး၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုလည္းေမလ ၁၈ ရက္ေန႕ ျပန္လည္စတင္ ေခၚယူဖို႔ သတ္မွတ္ရက္ ေၾကညာခဲ့တာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ယခုစကၤာပူနိုင္ငံဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ DDI Lab ရဲ႕ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားတဲ့ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ယုံၾကည္ကိုးကားထားေလသလား ထင္မွတ္ ရပါတယ္။
ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားရာမွာ မူရင္း အခ်က္ အလက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္မႈကလဲအလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ COVID -19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး မွန္ကန္မႈ ရွိပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ စကၤာပူနိုင္ငံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ DDI Lab ရဲ႕ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားတဲ့ ေဒတာအခ်က္ အလက္ေတြလည္းရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး မွန္ကန္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ဒါမွလည္းျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျမန္ဆုံး ျပန္လည္က်န္းမာနလန္ထနိုင္မွာမဟုတ္ပါလား။
လက္ရွိျမန္မာ့အေနအထားကကိုဗစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ေသေၾကပ်က္စီးမႈထက္ကိုကိုဗစ္ေရာဂါအလြန္ စီးပြား ပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ငတ္ေသကုန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနရတာ မဟုတ္ပါလား။
ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ (ေရာဂႏၲရ) ကပ္ေဘးႀကီးအျမန္ၿပီးဆုံးၿပီးငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း(ဒု ဗၻိကၡ ႏၲရကပ္)ေဘးႀကီးမဆိုက္ပါေစနဲ႕လို႔ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။
ဆွေမျိုးကို လေအိုးပေးပြီး နှစ်သိမ့်လိုမရဘူးငွေအိုးပေးနိုင်မှ ဆွေမျိုးကချစ်ပြလိမ့်မယ်။ငွေဒင်္ဂါးကို ထွေခင်းပြလိုက်ကွေကွင်းမသွားပဲ စံမြန်းပြလိမ့်မယ်။
ရွှေနဲ့ငွေသာပြလိုက် ဆယ်ဝမ်းကွဲတော်နေပါစေတစ်ဖင်ထဲ မွေးထားသလိုချစ်ပြလိမ့်မယ်။ငွေမရှာနိုင်လို့ကတော့ပေတစ် ရာပေါ် ငွေအသပြာမပါပဲသေသွားကြည့် ငိုမယ့်သူရောက်မလာဘူး။
စုဆောင်းငွေမရှိလို့ကတော့အိုဇာ မပြောနဲ့ငိုတာတောင် မျက်ရည်ပေါ နေလားလို့လာမေးလိမ့်မယ်။ထိုင်စားဖို့နေနေသာ ငိုင်နေရင်တောင် အားနေလား လို့မေးသွားလိမ့်မယ်။
ကြည်ဖြူဖို့အသာထားလိုက်ငြူစူရင်တောင် မျက်စောင်းကထိုးချင်သေးတယ်။ရွှေမရှိ ငွေမရှိရင်လမ်းပေါ်ရောက်သွားရင်တောင် လှမ်းခေါ်ထားမယ့်သူမရှိဘူး။
ငွေမရှိရင် တခြားသူနဲ့အူတိုဖို့မပြောနဲ့လူပို လို့သတ်မှတ်ပြီး တစ်နေ့ကို ၃ကြိမ်လောက်သင်္ချ ိုင်းကို မျက်စောင်းထိုးပြီး ပို့နေတာ။
အဖြေရှာကြည့် သေရာထိ ငွေမရှိရင်အကျွေးအမွေးတောင် တင့်တယ်အောင်မလုပ်ပေးဘူး။ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်ပါစေအထောက်ပံ့့ မပေးလို့ကတော့အသက်ရှိတယ်လို့တောင် မသတ်မှတ်ဘူး။
မေတ္တာ သစ္စာ တွေကို ခဏထားလိုက်ချစ်စရာ ငွေ မရှိရင် မိသားစုထဲ မှာ တောင် လူရာမဝင်ဘူး။ရွှေအကြောင်း ဖယောင်း သိသလိုငွေ အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင် ဆွေမျိုးဘယ်လောက် ခင်သလဲ ပေါ သလဲဆိုတာနဲ့သာ တိုင်းကြည့်ပေတော့။
ဆိုလိုချင်တာက ဆွေမျိုးအသိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူရာဝင်ဆံ့စေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီခေတ်ကြီးထဲ မှာ ငွေရှာတတ်ဖို့လိုတယ်။ငွေမရှာတတ်သူဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးအရှင် လတ် လတ်သေနေတာနဲ့တူတယ်။
အခြွေအရံ ဆိုတာကလည်း သူခြွေနိုင်မှသာ ကိုယ့်ကိုယ်လာပြီး ရံထားတတ်တာမျိုးပါ။ဒါကြောင့် ဆွေမျိုးတွေချစ်အောင်ငွေရှာနည်းလေးတော့ သင်ထားကြပါ သူငယ်ချင်း တို့
Min Gone Monestary Bagan
ေဆြမ်ိဳးကို ေလအိုးေပးၿပီး ႏွစ္သိမ့္လိုမရဘူးေငြအိုးေပးနိုင္မွ ေဆြမ်ိဳးကခ်စ္ျပလိမ့္မယ္။ေငြဒဂၤါးကို ေထြခင္းျပလိုက္ေကြကြင္းမသြားပဲ စံျမန္းျပလိမ့္မယ္။
ေ႐ႊနဲ႕ေငြသာျပလိုက္ ဆယ္ဝမ္းကြဲေတာ္ေနပါေစတစ္ဖင္ထဲ ေမြးထားသလိုခ်စ္ျပလိမ့္မယ္။ေငြမရွာနိုင္လို႔ကေတာ့ေပတစ္ ရာေပၚ ေငြအသျပာမပါပဲေသသြားၾကည့္ ငိုမယ့္သူေရာက္မလာဘူး။
စုေဆာင္းေငြမရွိလို႔ကေတာ့အိုဇာ မေျပာနဲ႕ငိုတာေတာင္ မ်က္ရည္ေပါ ေနလားလို႔လာေမးလိမ့္မယ္။ထိုင္စားဖို႔ေနေနသာ ငိုင္ေနရင္ေတာင္ အားေနလား လို႔ေမးသြားလိမ့္မယ္။
ၾကည္ျဖဴဖို႔အသာထားလိုက္ျငဴစူရင္ေတာင္ မ်က္ေစာင္းကထိုးခ်င္ေသးတယ္။ေ႐ႊမရွိ ေငြမရွိရင္လမ္းေပၚေရာက္သြားရင္ေတာင္ လွမ္းေခၚထားမယ့္သူမရွိဘူး။
ေငြမရွိရင္ တျခားသူနဲ႕အူတိုဖို႔မေျပာနဲ႕လူပို လို႔သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ေန႕ကို ၃ႀကိမ္ေလာက္သခၤ် ိုင္းကို မ်က္ေစာင္းထိုးၿပီး ပို႔ေနတာ။
အေျဖရွာၾကည့္ ေသရာထိ ေငြမရွိရင္အေကြၽးအေမြးေတာင္ တင့္တယ္ေအာင္မလုပ္ေပးဘူး။ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ျမက္ပါေစအေထာက္ပံ့့ မေပးလို႔ကေတာ့အသက္ရွိတယ္လို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ဘူး။
ေမတၱာ သစၥာ ေတြကို ခဏထားလိုက္ခ်စ္စရာ ေငြ မရွိရင္ မိသားစုထဲ မွာ ေတာင္ လူရာမဝင္ဘူး။ေ႐ႊအေၾကာင္း ဖေယာင္း သိသလိုေငြ အေၾကာင္းသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေဆြမ်ိဳးဘယ္ေလာက္ ခင္သလဲ ေပါ သလဲဆိုတာနဲ႕သာ တိုင္းၾကည့္ေပေတာ့။
ဆိုလိုခ်င္တာက ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းဝိုင္းထဲမွာလူရာဝင္ဆံ့ေစဖို႔အတြက္ဆိုရင္ဒီေခတ္ႀကီးထဲ မွာ ေငြရွာတတ္ဖို႔လိုတယ္။ေငြမရွာတတ္သူဟာ ဘာနဲ႕တူသလဲဆိုေတာ့ငုတ္တုတ္ထိုင္ၿပီးအရွင္ လတ္ လတ္ေသေနတာနဲ႕တူတယ္။
အေႁခြအရံ ဆိုတာကလည္း သူေႁခြနိုင္မွသာ ကိုယ့္ကိုယ္လာၿပီး ရံထားတတ္တာမ်ိဳးပါ။ဒါေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးေတြခ်စ္ေအာင္ေငြရွာနည္းေလးေတာ့ သင္ထားၾကပါ သူငယ္ခ်င္း တို႔
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် တဲ့ အခါမျိုး၊ ပြောချင်တဲ့ အဓိကအချက်ကို အာရုံစိုက်စေ ချင်လွန်းတာမျိုးရှိတဲ့အခါအဖေတွေက သားသမီးတွေကို အော်တတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အော်ဟစ်ခြင်းဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာကိုမပြေပျောက်စေ ပါဘူး။
ကိုယ်ပြောမယ့်အဓိကအချက်ကို ကလေးကပိုအာရုံစိုက်သွားမယ်လို့ ထင်မြင်တာ ကလည်း မှားပါတယ်။သင်အော်ဟစ်နေ တဲ့အချိန်မှာကလေးရဲ့စိတ်ထဲကြောက်စိတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဘာအတွေးမှ သူ့ခေါင်းထဲမှာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။သားသမီးတွေကိုမှမဟုတ်ဘဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခါအော်ဟစ်ခြင်းဟာပြဿနာကိုဘယ်လိုမှမဖြေရှင်းနိုင် တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေကိုပိုတောင်ဆိုးသွားစေပါတယ်။
သားသမီးတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ငွေကြေးလိုပါတယ်။ပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်တဲ့အခါ မိသားစုတွင်းသင့်ရဲ့တာဝန်ဟာ မကျေပွန်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။သင့်ပေါ် အကြောက်တရားသာရှိနေပြီး လေးစားမှုလျော့ကျနိုင်ပါတယ်။
အဖေဟာသူတို့အားကိုးထိုက်တဲ့ လူလို့ ကလေးရဲ့စိတ်မှာမပြောဘဲသိမြင်နေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ့အတွက် သင်ဟာ ကတိတည် ရပါမယ်။သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ရင် ခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး ပြောလို့ မရပါဘူး။သူတို့အတွက် သင်ဟာ မှန်းဆမရတဲ့သူ၊တသတ်မတ်တည်း မရှိတဲ့လူမျိုးအဖြစ်ထင်မြင်နေမှာမျိုးဟာ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အပျော်သဘောမျိုးဆိုရင်ကိစ္စမရှိ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာကိုယ့်ဇနီးကို၊ရိုက်တာ၊အော်တာအပြင်ထင်ထင်ရှားရှားဆန့်ကျင့်တာမျိုးတောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုဟာမိခင်တွေပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။သူတို့ မှီခိုရသူတစ်ယောက် စော်ကားခံရတာဟာ ကလေးတွေကို စိတ်ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေ ပါတယ်။
လိုချင်တယ်လို့တစ်ချက်ပြော လိုက် တာနဲ့ ချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေး တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။အသစ်အဆန်းတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ကလေးဟာအသစ်အဆန်းမြင်တိုင်း လိုချင်နေပါတယ်။ပူဆာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတကယ်လိုချင်တာလား၊ တကယ်နှစ်သက်တာလားဆိုတာကို သင့်ဘက်က သိဖို့လိုပါတယ်။ဝယ်ပေးသင့်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ပေးသင့်တဲ့ အရာကိုပဲ ဖြည့်ဆည်းပေး သင့်တာပါ။
ကလေးရဲ့ စိတ်ဟာ ပျော့ပြောင်း ပါတယ်။သူတို့ကိုနှိမ့်ချတာ၊သူတို့ကို မကောင်းပြောတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှု လျော့ကျ သွားပါတယ်။ငါဟာ သူတို့ပြောသလိုလူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်သွားတတ် ပါတယ်။ဘာကိုပဲတွေးတွေးငါကဒီလိုလူဆိုတဲ့အယူအဆပေါ် အခြေခံပြီးတွေးတောပါတော့ တယ်။
သားသမီးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာမှမိသားစုကို ရေရှည် စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်ဖို့၊ ယုံကြည်မှု ရှိနေဖို့ကလည်းအမြဲကြိုးစားနေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေကို အော်ဟစ် ရိုက်နှက်ဆုံးမတာထက်သူတို့ လေးစားအောင်စံပြနေပြတာကပိုထိရောက်တဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံဖြစ် းပါတယ်။
အညာသား စွယ်စုံကျမ်းမှ ပြန်လည်မျှဝေသည်။ဒါလေးဖတ်ပြီးရင် မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို ဖခင်တစ်ယောက် အနေနဲ့လွဲမှားစွာ ဆုံးမ အုပ်ချုပ်မိနေခဲ့လျှင် အချိန်မီပြင်ဆင် နိုင်ကြ ပါစေ။
ဖောင်ကြီးဆေးရုံတွင် အမှိုက်မီးရှို့စက်နှင့် မီးသဂြိုလ်စက် တည်ဆောက်ပြီးစီး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်-ဖောင်ကြီး) တွင်အမှိုက်မီးရှို့စက်နှင့် မီးသဂြိၤုလ်စက်တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ရာ ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့တွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန ဒုတိယဌာနမှူး ဒေါက်တာအောင်မြင့်မော်က ပြောကြားသည်။
အမှိုက်မီးရှို့စက်တွင်ရိုးရိုးအမှိုက်များသာမက ဆေးရုံသုံးစွှန့်ပစ်ပစ္စည်းကဲ့သို့ အမှိုက်များကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်စီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါလူနာများမတော်တဆုံးပါးသွားပါက မီးသဂြိုဟ်နိုင်ရန်အတွက်မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကိုလည်းဧပြီ ၃ ရက်နေ့မှစတင်တည် ဆောက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းက ဆက် လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှိုက်မီးရှို့စက်ကိုဒီဇယ်လောင် စာအသုံးမည်ဖြစ်ပြီးတစ်နာရီလျှင် အ မှိုက်တန်ချိန် သုညဒသမ နှစ်တန်မီးရှို့နိုင်ကြောင်းဒေါက်တာအောင်မြင့်မော်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှိုက်များကိုမီးရှို့ရာမှ ထွက်လာသည့်ပြာများကို၁၀ ပေပတ်လည်ရှိကန်ထဲထည့်ကာအနည်ထိုင်စေပြီး မီးခိုးငွေ့များကိုကျောက်မီးသွေးမှတစ်ဆင့် ကယ်ဆီယံကာဗွန်နိတ်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးသန့်စင်သည့်လေအဖြစ်လေထုထဲသို့ ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်း က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှည်းကူးမြို့ နယ်၊ဖောင်ကြီးဆေးရုံ (ယာယီ) တွင် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုးရှိသူများကိုကုသပေးရန် အရပ်ဘက်၊စစ်ဘက်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဆရာဝန်၊သူနာပြု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း နှစ်ရာခန့်နှင့်ကုတင်နှစ်ထောင်ခန့်ပြင်ဆင်ထား သည်။
ေဖာင္ႀကီးေဆး႐ုံတြင္ အမွိုက္မီးရွို႔စက္ႏွင့္ မီးသၿဂိဳလ္စက္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး
ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္-ေဖာင္ႀကီး) တြင္အမွိုက္မီးရွို႔စက္ႏွင့္ မီးသၿဂိၤုလ္စက္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ရာ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္သန႔္ရွင္းေရးဌာန ဒုတိယဌာနမႉး ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။
အမွိုက္မီးရွို႔စက္တြင္ရိုးရိုးအမွိုက္မ်ားသာမက ေဆး႐ုံသုံးစႊန႔္ပစ္ပစၥည္းကဲ့သို႔ အမွိုက္မ်ားကိုလည္း မီးရွို႔ဖ်က္စီးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ကိုဗစ္၁၉ ေရာဂါလူနာမ်ားမေတာ္တဆုံးပါးသြားပါက မီးသၿဂိဳဟ္နိုင္ရန္အတြက္မီးသျဂၤိုလ္စက္ကိုလည္းဧၿပီ ၃ ရက္ေန႕မွစတင္တည္ ေဆာက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါအမွိုက္မီးရွို႔စက္ကိုဒီဇယ္ေလာင္ စာအသုံးမည္ျဖစ္ၿပီးတစ္နာရီလွ်င္ အ မွိုက္တန္ခ်ိန္ သုညဒသမ ႏွစ္တန္မီးရွို႔နိုင္ေၾကာင္းေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါအမွိုက္မ်ားကိုမီးရွို႔ရာမွ ထြက္လာသည့္ျပာမ်ားကို၁၀ ေပပတ္လည္ရွိကန္ထဲထည့္ကာအနည္ထိုင္ေစၿပီး မီးခိုးေငြ႕မ်ားကိုေက်ာက္မီးေသြးမွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆီယံကာဗြန္နိတ္အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ၿပီးသန႔္စင္သည့္ေလအျဖစ္ေလထုထဲသို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ က ဆိုသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လွည္းကူးၿမိဳ႕ နယ္၊ေဖာင္ႀကီးေဆး႐ုံ (ယာယီ) တြင္ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားကိုကုသေပးရန္ အရပ္ဘက္၊စစ္ဘက္ႏွင့္ပုဂၢလိက ဆ ရာဝန္၊သူနာျပဳ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ႏွစ္ရာခန႔္ႏွင့္ကုတင္ႏွစ္ေထာင္ခန႔္ျပင္ဆင္ထား သည္။
ကပ်ရောဂါကြောင့် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၄၀၀ ကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အများအကျိုးအတွက်ဆိုစွမ်းစွမ်းတမံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပရဟိတမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid – 19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ရောလူပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေကသူမရဲ့အလှူလေးတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေပါဝင်နိုင်အောင် အခုလိုပဲ ပြောထားပါတယ်။
” တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မှာရှိတဲ့အခြေခံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူများအားတစ်ရပ်ကွက်လျှင် အိမ်ခြေ ၁၀၀ နှုန်းဖြင့် ရပ်ကွက်ပေါင်း၂၄ ရပ်ကွက်အိမ်ခြေ ၂၄၀၀ အား ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ငါးပိ၊ငါးခြောက်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ကြက်သွန်နီ၊ မြေပဲ နှင့်မီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများအားကျမတို့ အဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမလှူသောအလှူတိုင်းသည်စေတနာရှင် ၇ ရက်သားသမီးများနှင့်ပူပေါင်းလှူသောအလှူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ယူချင်သူများ ပါဝင်လှူတန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့လူတကာအိမ်ထဲမှာသက်တောင့်သက်သာနေနိုင်ဖို့အတွက်သူမကိုယ်တိုင်နားရက်မရှိကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက်ဒီထက်မကလှူနိုင်တန်းနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကပျရောဂါကွောင့ျ တောငျဒဂုံမွို့နယျက စားဝတျနရေေးခကျခဲတဲ့ အိမျထောငျစုပေါငျး ၂၄၀၀ ကို ထောကျပံ့လှူဒါနျးဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ …
သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အမြားအကြိုးအတှကျဆို စှမျးစှမျးတမံ ကူညီဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ ပရဟိတမငျးသမီးလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ Covid – 19 ရောဂါ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးလုပျငနျးစဉျမြားအတှကျ သူမကိုယျတိုငျ စိတျရောလူပါ ကူညီဆောငျရှကျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့မှာလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ သူမရဲ့ အလှူလေးတဈခုကို ပရိသတျတှပေါဝငျနိုငျအောငျ အခုလိုပဲ ပွောထားပါတယျ။
” တောငျဒဂုံမွို့နယျ မှာရှိတဲ့ အခွခေံ ဆငျးရဲနှမျးပါးပွီး စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူမြားအား တဈရပျကှကျလြှငျ အိမျခွေ ၁၀၀ နှုနျးဖွင့ျ ရပျကှကျပေါငျး၂၄ ရပျကှကျအိမျခွေ ၂၄၀၀ အား ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးခွောကျ၊ ခေါကျဆှဲခွောကျ၊ ကွကျသှနျနီ၊ မွပေဲ နှင့ျ မီးဖိုခြောငျသုံး ကုနျခွောကျပစ်စညျးမြားအား ကမြတို့ အဖှဲ့မှ လှူဒါနျးသှားမညျဖွဈပါတယျရှငျ။ကမြလှူသော အလှူတိုငျးသညျ စတေနာရှငျ ၇ ရကျသားသမီးမြားနှင့ျပူပေါငျးလှူသောအလှူမြားဖွဈတဲ့အတှကျ ကုသိုလျယူခငြျသူမြား ပါဝငျလှူတနျးနိုငျပါတယျရှငျ။” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ လူတကာ အိမျထဲမှာ သကျတောင့ျသကျသာနနေိုငျဖို့အတှကျ သူမကိုယျတိုငျ နားရကျမရှိ ကွိုးစားနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျ ဒီထကျမက လှူနိုငျတနျးနိုငျပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနောျ။
April 27, 2020 April 27, 2020 by Shwengwe Games
ဦးဇင်းလည်းစဉ်းစားမိပါတယ်။ငါဘာလို့အရင်တုန်းက မဟာသမယသုတ်ကိုမပူဇော်ဖြစ်တာပါလိမ့်ပေါ့။သူများကလည်းတိုက်တွန်းဖူးတာပဲ။ပူဇော်ဖြစ်ဖို့အချိန်အခါမရောက်သေးတော့လည်းဘယ်သူပဲတိုက်တွန်းတိုက် တွန်း မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
ကိုယ့်ရင်ထဲကစေတနာနဲ့ပူဇော်ချင်စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အရင်တုန်းကခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မဟာသမယသုတ်ဟာခုကျတော့ ပူဇော်ရတာပျော်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။နတ်တွေနာမည်တွေလည်းအများကြီးပါတာဆိုတော့ပိုတောင်သဘောကျသေးတယ်။ဒါ့ကြောင့် နတ်ချစ်ဆေး သုတ္တန် လို့ပြောကြတာနေမှာ။
မဟာသမယသုတ်ကို ဘာ့ကြောင့်နတ်ချစ်ဆေးသုတ္တန် လို့ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်ဒီသုတ္တန်ထဲမှာနတ်တွေကသူတို့ရဲ့နာမည်တွေလည်းပါတော့မဟာသမယသုတ်ပူဇော်တဲ့သူတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကလည်းသြဝါဒပေးသလိုကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတဲ့သူတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။
မှတ်ချက်နတ်တို့စောင့်ရှောက်ပုံအ ကြောင်းအရာအကျယ်ကို နယုန်လပြည့်နေ့ မှာလှူပေးမယ့်မဟာသမယသုတ်နှင့်ကိုယ်တွေ့ထူးခြားမှု့များစာအုပ်ထွက်လာရင်ဖတ်ရအုံးမှာပါ။မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်ပြီဆိုရင် ပထမ ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်ခြေဆေး၊လက်ဆေး၊မျက်နှာသစ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ ငါးပါးသီလယူနတ်တွေပင့်၊မေတ္တသုတ်ပူဇော်ပြီးတာနဲ့မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်ပါ။ပူဇော်ပြီးတာနဲ့ မေတ္တာ ပို့ မိမိတို့ရတဲ့ကုသိုလ်အဖို့ဘာဂကိုအမျှပေးဝေပြီး သစ္စာဆိုတိုင်တည်ကာ
အကူအညီတောင်းတာ၊မတောင်းတာမိမိတို့အပိုင်းဖြစ်ပါသည်) နေ့စဉ်မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်တဲ့အကြိမ်ရေများလာတာနဲ့အမျှ မိမိတို့ရဲ့အကြံအစည်တွေ၊စိတ်ကူးတွေကိုမြန်မြန်အကောင် အထည်ဖော်နိုင်အောင်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမယ့်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရင်ထဲကဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြလိုက်ပါ။ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူ/သားကို စိတ်ထဲကနေကားစီးချင်ပါတယ်လို့ ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်သိပါ့မလဲ။ဝယ်ပေးပါ့မလား။ကားဝယ်ပေးချင်လာအောင်ဘာညာကွိကွနဲ့ပူဆာရမှာပဲ။အဲလိုပြောမှ ဝယ်ပေးမှာပေါ့။
ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ။မျက်စိထဲမြင်လာအောင်ဥပမာပေးလိုက်တာ။မဟာသမယသုတ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူဇော်သွားရင် အကျိုးထူးတွေကလည်းအချိန်တန်ရင် ခံစားရလာပါလိမ့်မယ်။နေ့စဉ်ပူဇော်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။တကယ်ယုံကြည်ရင်အကျိုးပေးပါတယ်။အော်နေဦး.အရေးကြီးတာတစ်ခုပြောချင်သေးတယ်။
ဟိုလူကဟိုဟာကောင်းတယ်ဆိုလုပ်လိုက်၊ဒီဟာကောင်းတယ်ဆိုလုပ်လိုက်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း အကျိုးပေးထက်သန်မှု့မရှိဘူး။တစ်ခုခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်သွားကြည့်ပါ။ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တကယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့လွတ်မြောက်ချင်သူတွေဟာရက် (၁၀၀)အဓိဋ္ဌာန် တစ်ရက်မှ မပျက်ဘဲလုပ်ကြည့်ပါတဲ့။
ဘယ်အချိန်တွေဟာ အကောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်လူခြေတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်တွေပါပဲ။ဥပမာ မနက်အစောဆိုရင် ၅.နာရီ၊၆.နာရီပေါ့။နေ့လည်ဆိုရင် ၁၂ နာရီကျော်လောက်ပေါ့။ညဆိုရင် ၉ နာရီနောက်ပိုင်းပေါ့။မိမိတို့အဆင်ပြေမယ့်အချိန်ကြည့်ပြီးပူဇော်သွားကြပါ။မဟာသမယသုတ်ပူဇော်တဲ့အချိန်တိုင်းလည်းကိုယ့်ကိုသတိပေးပါ။
ငါ..လူသိနည်းသေးတဲ့မဟာသမယသုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပူဇော်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံကံတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ။တကယ်လည်းမဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်တဲ့သူတွေနည်းပါသေးတယ်။မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်တဲ့သူများလာအောင်လည်း ဦးဇင်းကြိုးစားသွားအုံးမှာပါ။မဟာသမယ သုတ်ကိုနေ့စဉ်ပူဇော်နိုင်ကြပြီးစိတ်အေးချမ်းမှု့များရကြပါစေ
မအေးသောင်း နဲ့ အိချောပိုတို့တောင် သဘောကျနေတဲ့ ကိုပေါက် ရဲ့ Tik Tok လေး
ကိုပေါက်ကတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်ပါအောင်မြင်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေက ပရိသတ်တွေကြား လူကြိုက်များပြီး “ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း အောင် မြင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ကိုပေါက်ကသူ့ရဲ့ရိုက်လက်စ ရုပ်ရှင်အကုန်လုံးကိုရပ်နားထားပြီးအိမ်မှာပဲ မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ကိုပေါက်က “သီချင်းလေးတွေနဲ့ အရမ်းချစ်စရာလှလှပပလေးတွေ ဆော့ကြတဲ့မတ်မတ် အေးသောင်း၊ မတ်မတ်အိချောပို၊မတ်မတ် ခြူးလေးတို့ကိုအားကျလို့။မတ်မတ်တွေကိုမေးပေးနော်။သာမီးလိုခရုတွေ ပက်ကျိတွေဖြစ်အောင်ဆော့တတ်လို့လားလို့” ဆိုပြီး Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို တင်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုပေါက်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုပေါက်ရဲ့ အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အိချောပိုတို့၊ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့တောင် သဘောအကျကြီးကျနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်းကိုပေါက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျကြိုက် နှစ်သက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
မအေးသောငျး နဲ့ အိခြောပိုတို့တောငျ သဘောကနြတေဲ့ ကိုပေါကျ ရဲ့ Tik Tok လေး
ကိုပေါကျကတော့ ဇာတျပို့ဇာတျရံတစျယောကျအဖွစျကနေ ဒါရိုကျတာတစျယောကျအဖွစျပါ အောငျမွငျလာသူတစျယောကျ ဖွစျပါတယျ။ ကိုပေါကျရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေ ပရိသတျတှကွေား လူကွိုကျမြားပွီး “ရိုးမပျေါကတြဲ့မကျြရညျ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကလညျး အောငျမွငျခဲ့တာပဲ ဖွစျပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ကိုပေါကျက သူ့ရဲ့ရိုကျလကျစ ရုပျရှငျအကုနျလုံးကို ရပျနားထားပွီး အိမျမှာပဲ မိသားစုနဲ့ ပျြောပျြောရှငျရှငျ အခြိနျကုနျဆုံးနတောပဲ ဖွစျပါတယျ။
ဒီနေ့မှာတော့ ကိုပေါကျက “သီခငျြးလေးတှနေဲ့ အရမျးခစျြစရာ လှလှပပလေးတှေ ဆော့ကွတဲ့ မတျမတျ အေးသောငျး၊ မတျမတျ အိခြောပို၊ မတျမတျ ခွူးလေးတို့ကိုအားကလြို့။ မတျမတျတှကေိုမေးပေးနျော။ သာမီးလို ခရုတှေ ပကျကြိတှဖွေစျအောငျ ဆော့တတျလို့လားလို့” ဆိုပွီး Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို တငျထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ကိုပေါကျရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုလေးကို မြှဝပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကိုပေါကျရဲ့ အမိုကျစား သရုပျဆောငျခကျြတှကွောငျ့ အိခြောပိုတို့၊ အေးဝတျရညျသောငျးတို့တောငျ သဘောအကကြွီးကနြရေတာပဲ ဖွစျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ကိုပေါကျရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကွညျ့ပွီး သဘောကကြွိုကျနှစျသကျကွမယျ ထငျပါတယျ။
“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူများဖန်တီးလိုက်သောဗိုင်းရပ်စ် “ဟုဂျပန်နိုဗယ်ဆုရှင်က အတိလင်းပြောလိုက်
ကိုဗစ်၁၉ နဲ့ ပတ်သက်လို့ဂျပန် နိုဘယ်လ် ဆုရှင်ကြီး တင်ပြတာစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ဝူဟန် ကိုဗစ်၁၉ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဇီဝကမ္မဗေဒသို့မဟုတ်ဆေးပညာပါမောက္ခဒေါက်တာ Tasuku Honjoက Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်”သဘာဝမဟုတ်သောအရာ” ဖြစ်သည်ဟု ယနေ့ မီဒီယာများရှေ့တွင် ဖွင့်ဟခဲ့ပါသည်။အကယ်၍သာ ၎င်းသည်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သည်ဆိုပါက ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံများတွင်အပူချိန်များသည် ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။အကယ်၍သာ ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည်သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာပါကတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အပူချိန်တူသောနိုင်ငံများကိုသာထိခိုက်ပေလိမ့်မည်။
၎င်းအစား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်၊သဲကန္တာရဒေသများတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။၎င်းသည်သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်အအေးခန်းများတွင်ပျံ့နှံ့သွားသော်လည်းပူသောနေရာများတွင်သေဆုံးသွားပေမည်။ကျွန်တော်သည်နှစ်ပေါင်း 40ကြာသည့်တိုင်အောင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအပေါ်သုတေသနပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါဟာ သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်ထားပြီး လူများဖန်တီးလိုက်သောဗိုင်းရပ်စ်အတုသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိWuhan ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ၄ နှစ်ကြာအောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်သည် ထိုဓာတ်ခွဲခန်း၏ဝန်ထမ်းအားလုံးနှင့်ကောင်းစွာသိကျွမ်းပါသည်။Corona ပျံ့နှုံ့ပီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်က သူတို့အားလုံးကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပါသည်။သို့ရာတွင် သူတို့ဖုန်းများအားလုံးသည်ပြီးခဲ့သည့် ၃ လတွင် SIM Cardများသည်သေနေပြီး ဖုန်းခေါ်ဆို၍ မရခဲ့ပါ။အခုတော့ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်တွေအားလုံးသေသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။
ကျွန်တော်၏ ယနေ့အထိဗဟုသုတနှင့်သုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်း100% ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြောနိုင်ပါသည်။”ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည်လင်းနို့များမှလာသည်မဟုတ်၊တရုတ်က ၎င်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်”အကယ်၍ ယနေ့ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော့်ပြောကြားချက်ကိုမှားယွင်းကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့လျှင်အစိုးရက ကျွန်တော့်နိုဗယ်ဆုကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံသည် လိမ်နေပြီးဒီအမှန်တရားကို တစ်နေ့နေ့တချိန်ချိန်မှာလူတိုင်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါလိမ့်မယ်။
Credit dnaekhit media
“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာလူမ်ားဖန္တီးလိုက္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ “ဟုဂ်ပန္ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္က အတိလင္းေျပာလိုက္
ကိုဗစ္၁၉ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ဂ်ပန္ ႏိုဘယ္လ္ ဆု႐ွင္ႀကီး တင္ျပတာစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ဝူဟန္ ကိုဗစ္၁၉ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ဇီဝကမၼေဗဒသို႔မဟုတ္ေဆးပညာပါေမာကၡေဒါက္တာ Tasuku Honjoက Corona ဗိုင္းရပ္စ္သည္”သဘာဝမဟုတ္ေသာအရာ” ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ မီဒီယာမ်ားေ႐ွ႕တြင္ ဖြင့္ဟခဲ့ပါသည္။အကယ္၍သာ ၎သည္သဘာဝအတိုင္းျဖစ္သည္ဆိုပါက ကမ႓ာတစ္ခုလုံးကိုဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားထိခိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အပူခ်ိန္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။အကယ္၍သာ ၎ဗိုင္းရပ္စ္သည္သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာပါကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အပူခ်ိန္တူေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုသာထိခိုက္ေပလိမ့္မည္။
၎အစား ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္၊သဲကႏၲာရေဒသမ်ားတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။၎သည္သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္အေအးခန္းမ်ားတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ္လည္းပူေသာေနရာမ်ားတြင္ေသဆုံးသြားေပမည္။ကြၽန္ေတာ္သည္ႏွစ္ေပါင္း 40ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားအေပၚသုေတသနျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ဒါဟာ သဘာဝမဟုတ္ပါဘူး။၎ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းမွထုတ္လုပ္ထားၿပီး လူမ်ားဖန္တီးလိုက္ေသာဗိုင္းရပ္စ္အတုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ႐ွိWuhan ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုဓာတ္ခြဲခန္း၏ဝန္ထမ္းအားလုံးႏွင့္ေကာင္းစြာသိကြၽမ္းပါသည္။Corona ပ်ံ႕ႏႈံ႕ပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ကြၽန္ေတာ္က သူတို႔အားလုံးကိုဖုန္းဆက္ခဲ့ပါသည္။သို႔ရာတြင္ သူတို႔ဖုန္းမ်ားအားလုံးသည္ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ လတြင္ SIM Cardမ်ားသည္ေသေနၿပီး ဖုန္းေခၚဆို၍ မရခဲ့ပါ။အခုေတာ့ ဒီဓာတ္ခြဲခန္းပညာ႐ွင္ေတြအားလုံးေသသြားၿပီဆိုတာသိလိုက္ရပါၿပီ။
ကြၽန္ေတာ္၏ ယေန႔အထိဗဟုသုတႏွင့္သုေတသနအေပၚ အေျခခံ၍Corona ဗိုင္းရပ္စ္သည္သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း100% ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။”ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္လင္းႏို႔မ်ားမွလာသည္မဟုတ္၊တ႐ုတ္က ၎ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္”အကယ္၍ ယေန႔ ဒါမွမဟုတ္ကြၽန္ေတာ္ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပိုင္းကြၽန္ေတာ့္ေျပာၾကားခ်က္ကိုမွားယြင္းေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့လွ်င္အစိုးရက ကြၽန္ေတာ့္ႏိုဗယ္ဆုကိုျပန္၍႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လိမ္ေနၿပီးဒီအမွန္တရားကို တစ္ေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာလူတိုင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာပါလိမ့္မယ္။
ဘာသာျပန္သူ – KoTinNaingOo
← Previous Page1 … Page198 Page199 Page200 … Page222 Next →